iimarike Archives - Funda ukurhweba
XLM / USD (Stellar) Ixabiso; Ukuhamba ngokuHamba kuyaqhubeka ngaphakathi kwe- $ 0.42 kunye ne- $ 0.33
Uhlalutyo lwamaxabiso e-STELLAR-Matshi 17
Ukwahlukana kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42 kuya kuqhuba ixabiso liye kwi- $ 0.50, kunye ne- $ 0.57. Kwangolo hlobo lunye, ukophuka kwenqanaba lenkxaso kwi-0.33 yeedola kuya kunciphisa ixabiso liye kuma- $ 0.22 kunye ne- $ 0.16 amanqanaba.
Amanqanaba enkxaso: $ 0.33, $ 0.22, $ 0.16
I-XLM / USD yexesha elide iTrend: Ukurola
I-Stellar iyaqhubeka ngokuhamba okujikelezayo. Ukuqhekeka koonxantathu abalinganayo kwitshathi yemihla ngemihla akubathandanga abathengi okanye abathengisi. Abarhwebi balindele ukuqhekeka emantla okanye emazantsi kodwa iinkunzi zeenkomo kunye neebhere azifumananga mandla ngokwaneleyo okuqhuba ukuthengisa. Ukuhamba okuqhubekayo kuyaqhubeka kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42 kunye nenqanaba lenkxaso le- $ 0.33.
Itshathi yemihla ngemihla yeXLMUSD, nge-Matshi 17
Amaxesha ali-9 e-EMA ahlala enxibelelene namaxesha angama-21 e-EMA kwaye ixabiso liyarhweba ngaphaya kwee-EMA ezimbini ezibonisa ukuba ukudityaniswa kuyaqhubeka kwintengiso yeXLM. Iziganeko ezisisiseko ezifunekayo ziyafuneka ukuze kuphulwe ixabiso ukusuka kwimowudi eyahlukeneyo. Ukwahlukana kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.42 kuya kuqhuba ixabiso liye kwi- $ 0.50, kunye ne- $ 0.57. Kwangolo hlobo lunye, ukophuka kwenqanaba lenkxaso kwi-0.33 yeedola kuya kunciphisa ixabiso liye kuma- $ 0.22 kunye ne- $ 0.16 amanqanaba. Nangona kunjalo, ixesha lesalathiso samandla esimalunga ne-14 sikhomba kumanqanaba angama-50 athetha ukuthenga umqondiso.
I-XLM / USD yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukutshintsha
I-XLM iphakathi kwe- $ 0.42 kunye ne- $ 0.33 yenqanaba lexabiso. Uxinzelelo lwabathengi luhlala lusezantsi kwaye alunakunyusa ixabiso. Kwangokunjalo, uxinzelelo lwabathengisi lubuthathaka ngokulinganayo kwaye alunakunyusa amaxabiso ngaphezulu kwenqanaba le- $ 0.33. Ixabiso lixabisa ngaphakathi kwe- $ 0.42 kunye ne-0.33 yenqanaba lexabiso. Iziganeko ezisisiseko ezinokufuneka ukuze kuphulwe ingqekembe kude nemowudi yokudityaniswa, kungenjalo ukudityaniswa kuyaqhubeka kude kubekho ukungazinzi kwintengiso yeStellar.
XLMUSD 4-h-itshathi yethu, ngoMatshi 17
Ixabiso lithengiswa ngaphezulu nangapha kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA ngala mabini adityanisiweyo. Ixesha eliDibeneyo lokuBonisa amaNqanaba eli-14 likumanqanaba angama-50 kwaye umgca womqondiso awubonakalisi ulwalathiso lwamaxabiso athile.
tags Marketing, kwiimarike, Uhlalutyo Technical, XLMUSD
I-LonghornFX -Fumana oyena Mthengisi ubalaseleyo we-Forex
Xa kuziwa ekukhetheni umrhwebi omtsha oza kurhweba naye, kusenokwenzeka ukuba uziva ngathi utsibela kwisiphelo esinzulu sedama lokuqubha. Kukho iimfumba zabarhwebi ezibonelela ngeemeko ezahlukeneyo zokurhweba, kwaye nawuphi na umrhwebi- nokuba uyaqala, okanye ujonge umrhwebi ongcono wokuqhubeka nokuthengisa- unokuphela uziva udidekile. Ukuba inye into enokusifundisa, kukuba kufuneka uthathe amathuba akho ukuba ufuna ukuphumelela. Kodwa iLonghornFX ilapha ukunceda ukwenza urhwebo lube lula kwaye lufikeleleke ngakumbi kunangaphambili.
Yaziswa kwi-2020, i-LonghornFX yi-Broker ekwi-Intanethi eseke igama elihle ngokusekwe kwiinkonzo zayo ezinokuthenjwa neziselubala. Ukuba yi-ECN Broker, abathengisi banikwa ukufikelela ngokuthe ngqo kwiimarike zemali zehlabathi kwaye banokuvula izikhundla ngokuthe ngqo, bephelisa amaxesha okulinda kunye nemirhumo eyongezelelweyo.
Zeziphi iiasethi ezikhoyo?
ILonghornFX ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zabarhwebi, inika ukhetho olukhulu lweeasethi zokurhweba ngazo. Lilonke, iqonga libonelela ngaphezulu kwee-asethi ze-170 + ezisusela kwizibini ze-Forex kunye neePair ze-Crypto ukuya kwiiStock, ii-Indices, kunye neMveliso. Zonke ezi asethi ziyafikeleleka kwiqonga elinye, ke abathengisi banokujonga kwaye bangene kuyo nayiphi na intengiso abayikhethayo, ngokulula!
Bhalisela i-LonghornFX kwaye ufumane ukufikelela kwi-24/7 ye-Crypto Trading kunye nokunye Ixesha elide FX
Esinye sezibonelelo eziphambili ezinikezelwa yiLonghornFX sisakhono sokwandisa inzuzo ngokurhweba okuphezulu. Ukuxhobisa kwenza ukuba abathengisi bavule izikhundla ezixabisa ngaphezulu kweemali kwiakhawunti yabo, kwaye imivuzo iyakwandiswa nkqu nentshukumo encinci yamaxabiso. NgeLonghornFX, abarhwebi banokusebenzisa ezi zinto zilandelayo:
● I-Forex: 1: 500
● Izinyithi - 1: 500
● Iimpawu - 1: 200
● Amandla - 1: 200
● I-Crypto - 1: 100
● Izitokhwe - 1:20
Leliphi iqonga elisebenzisa iLonghornFX?
Imisebenzi yeLonghornFX ngokusebenzisa iqonga lokuthengisa iMetaTrader 4, elinconywa kakhulu kuluntu lwentengiso ye-Intanethi. Eli qonga libonelela ngeetshathi ezinokwenziwa ngokwezifiso, ukwenziwa kwe-odolo yexesha lokwenyani kunye nokukhetha okukhulu kwezalathi ukunceda abathengisi bahlalutye izikhundla zabo ngokufanelekileyo.
Ngaphandle kweAkhawunti yokuRhweba ngokuBukhoma, abarhwebi banokukhetha ukuvula iAkhawunti yeDemo, apho banokuziqhelanisa nokuthengisa okanye kuvavanye iindlela ezintsha kwindawo engenabungozi.
Ngaba iLonghornFX ibonelela ngeNkxaso yaBathengi?
Xa urhweba neLonghornFX, abathengi baxhamla ekufikeleleni kwiQela leNkxaso yaBathengi elifumanekayo 24/7. Nanini na xa umthengi enombuzo okanye ehlangabezana nomba, banokunxibelelana noMmeli weNkxaso ngokuthe ngqo kwiNgxoxo yeWebhu, nge-imeyile okanye ngokucela umnxeba.
Zeziphi iindlela zokuDiphozitha kunye nokuTsala ezikhoyo?
Ukuqala ukurhweba kwiakhawunti ebukhoma, abathengi baya kudinga ukufaka ubuncinci be- $ 10. Ezi mali zinokufakwa kwi-Bitcoin okanye ngokusebenzisa iKhadi leBhanki. Abarhwebi baya kufumana isikhokelo esichazayo sokufaka kwiwebhusayithi yeLonghorn FX kwaye unokunxibelelana neQela leNkxaso ukuze ufumane olunye uncedo.
Xa kuziwa ekurhoxiseni imali, zonke iintengiselwano ziya kuqhutyelwa ngaphakathi kweeyure ezingama-24 ukuze abathengisi bonwabele impumelelo yabo, akukho kubanjwa kuthintelwe!
Qalisa ukurhweba nge-Forex, i-Crypto kunye nokunye ngeLonghornFX. Yenza iakhawunti yakho yasimahla kwi Ixesha elideFX
tags Ixesha elide FX, kwiimarike, upapasho ndaba zekhampani, Trading
Yintoni eyona nto ibalulekileyo kurhwebo?
Masijongane nayo, esona sizathu sokuba abantu bathengise kukwenza inzuzo. Injongo yethu ephambili kukubandakanya iimarike zezemali kwaye sigqibe ukwenza imali ngokwenza njalo.
Okulusizi kukuba, uninzi lwabarhwebi luxakeke kakhulu kukwenza imali abadla ngokungaluhoyi ukhuseleko lwenkunzi yabo yorhwebo. Bacinga ukuba banokwenza malini ngosuku, ngeveki okanye ngenyanga, ngaphandle kokucinga ngendlela abanokugcina ngayo ikapitali yabo ikwimeko ezimbi kakhulu.
Ewe, iimeko ezibi kakhulu ziyenzeka, kwaye okuhlekisayo kukuba zezona meko zibalaseleyo zabarhwebi abathile. Le yimizekelo yakutshanje yezi meko.
Inkathazo yangaphambi kwexesha lokubolekwa kwemali ngo-2007 ukuya ku-2010
Ukuphazamiseka kwesibane ngoMeyi 2010
Inyikima enkulu kunye nokuwa kwenyukliya eJapan, ngo-2011
Ukungazithembi okungathethekiyo kwiibini ze-CHF, ngo-2015
Ngokungaqhelekanga, iimarike zebheraki ezikhawulezayo ezikhawulezayo zango-2020, ezazilandelwa ngumsindo oqinileyo. 2020
Kwaye uluhlu lungaqhubeka.
Nganye yezi meko zibangelwe kukuzuza okukhulu kubarhwebi kunye nelahleko enkulu kwabanye. Kuyaziwa ukuba intengiso ine-symmetry; xa usiya kwicala elinye wenza imali, abo baya kwelinye icala baya kubona ukungakhathali kwizikhundla zabo. Umzekelo, xa imeko yokungazinzanga engazange ibonwe yenzeke kuzo zonke i-CHF ngababini ngo-2015 (izizathu ezingaphaya kwala manqaku amafutshane), ndiyazi ukuba ngumrhwebi ovele exhase iakhawunti yakhe nge-1000 yeedola kwiveki kwaye inkunzi yaya kaput. Ndiyazi omnye umrhwebi wasetyhini owayenemali engaphantsi kwama-30,000 yeedola kwiakhawunti yakhe, kuphela ukuba avuke kwaye abone ngaphezulu kwe-800,000 ye-USD equity kwiakhawunti yakhe!
Oko kusizisa kweyona nto ibaluleke kakhulu, ndiyazi ukuba abarhwebi abasindileyo kwezi meko okanye benza iinzuzo ezinkulu kubo. Isizathu kukuba baluthathe nzulu ukhuseleko lweemali zabo.
Xa unemali kwiakhawunti yakho, unokurhweba kwaye ulindele ukuzuza. Nangona kunjalo, ukuba imali ihambile, ungasebenzisa ntoni ukwenza intelekelelo eyongezelelweyo? Akukho nto. Olona khetho unokufumana lona kukuxhasa ngemali iakhawunti kwakhona, ukuze uphinde uqalise ukurhweba.
Inzuzo kunye nomngcipheko
Andinasiqinisekiso sokuba urhwebo olulandelayo luya kuphumelela, okanye luphulukane. Akukho siqinisekiso sokuba iimeko ezibi kakhulu azinakwenzeka nangaliphi na ixesha, ezinokuba nefuthe kwikapitali yam yorhwebo. Oko umntu akubiza ngokuba yimeko embi kunokuba yimeko elungileyo kuwe. Yintoni ezisa ilahleko kwabanye yinto ezisa inzuzo kuwe.
Kodwa ndinesiqinisekiso sokuba nje ukuba ndiluthathe nzulu ukhuseleko lweakhawunti yam kwaye ndisebenzise ubuchule bokulawula umngcipheko kurhwebo lwam, iimeko ezimbi azinakuba neziphumo ezibi kum, kwaye iimeko ezintle ziya kuhlala zizisa iziphumo ezonelisayo.
Ukuba ndiceba ukufumana i-500 yeedola ngosuku olunye, ukuba ne-2000 yeedola kuphela kwiakhawunti yam, ndingafuna ukucinga ngento enokwenzeka, ukuba imakethi iyahamba ngokuchasene nam? Ngaba ndingafuna ukwamkela ilahleko engama-25% kurhwebo olunye? Ukuba andinako ukwamkela ilahleko engama-25% kolo rhwebo, kuya kufuneka ndiyinciphise imali esengozini ngakumbi.
Ngokwenyani ndibeka umngcipheko kwi-2% okanye ngaphantsi kurhwebo ngalunye.
Ukhuseleko lweakhawunti yakho yeyona nto iphambili: iingeniso zikwasesekondari kuphela. Gcina iakhawunti yakho ngolawulo lomngcipheko kwaye iingeniso ziya kuza ngokwendalo. Qiniseka nje ukuba uyasinda kwiimarike zethuba elide kwaye uya kuba nobungqina bokwabelana. Uya kuba neenzuzo oza kuzibonisa ngenxa yoloyiso lwakho.
Nokuba silunge kangakanani okanye sinobuchule kangakanani okanye sinamava kangakanani, asinakho ukuthintela ilahleko ngamanye amaxesha, kwaye yiyo loo nto eyenza ukurhweba kube mnandi kwaye kube ngumceli mngeni. Injongo yomrhwebi ophumeleleyo ke ngoko kukuba nelahleko encinci kunenzuzo. Ukuba ndenza ilahleko iyonke ye-3500 USD ngenyanga, kwaye ndenza inzuzo iyonke ye-8000 USD kwinyanga enye, leyo yinyanga enenzuzo kum.
Ngokwenyani, ukuba ugcina imali yakho ikhuselekile ebusweni be-vagaries yentengiso, ekugqibeleni uyakugqiba ukuba sisityebi kunangoku.
NB: Bukela inqaku elityhila eyona nto ibaluleke kakhulu eya kuqinisekisa iingeniso ezingaguquguqukiyo, eza kungekudala.
tags izinto ezibalulekileyo, kwiimarike, ingozi, Izimvo zorhwebo